Badweyntimes.com » XOG Vedio:Maxaa sababay Guusha Farmaajo ee codadka iyo Guul daradii MD Xasan oo ahBadweyntimes.com
XOG Vedio:Maxaa sababay Guusha Farmaajo ee codadka iyo Guul daradii MD Xasan oo ah
Feb 8, 2017 - jawaab
Sida ay sheegayan warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in guusha farmaajo kadanbeyse kadib markii lafashiliyay qorshayaal lagu sheegay in hore u dagayn Kooxda damul-jadiid iyo waliba dowlada itoobiya.
Maalmo kahor ayaa ni baahinay warar shegaayay in saraakiil itoobiyaan muqdisho keeneyn qalab lagu sawiraayo waraaqda hadba musharaxa u codeeyay taasina loo adeygsan lahaa kooxda lacagta ka qaadato madaxweyen Xasan Sheekh in codka siiso.
Fashilka haatan kadhacay xarunta barlamaanka ayaa lasheegayaa in ay kadanbeyse kadib markii lasheegay in gudoonka doorashada joojiyeen isticmaalka qalimaanta xildhibaanada wataan iyo waliba ookiyaale waxaana taasi sababtay in xildhibaan waliba qof oo doonaayo codka siiyo.
Sido kale goobta xildhibaanada ku codeynayaan ayaa loo jeedaa ayadoo si dhow loola socdo dhaq dhaqaaqooda taasina sababtay in guul usoo hoyato farmaajo waxaana weli la ogaan karin shaqsi guusha raaci doono.
Arinta kale ee loo sababeynaayo ayaa ah xildhibaano cusub oo isbadal doon ah soo galayn barlmaanka cusub ayadoo ubadanyihiin dhalinyaro kuwaasi oo damacsan in dalka kadhacdo isbadal muuqda dhanka siyaasada.
Daawo:Sheekh Shariif oo khiyaamay isbaheysiga Isbadal doonka kuheshiyeeyay iyo Codadka oo heysto garaayo
DEG DEG: Wareega 2-aad ee Doorashada M/weynaha oo lasoo Afjaray & Tirinta Codadka oo bilaabatay…